Saxeexaaga ka taxadir meesha aad ku qorayso | Hallå konsument - Konsumentverket
Ku cusub Swiidhan: Saxeexaaga ka taxadir meesha aad ku qorayso
Saxeexaagu waa mid adiga kuu gaar ah oo aad u qiimo badan. Haddii aad magacaaga ku saxeexdo heshiis ama kontaraag, waa inaad raacdo dhamaan shuruudaha heshiiskaas. Soo ogow waxa saxa ee heshiisku yahay ka hor inta aanad ku saxeexin magacaaga.
Swiidhan, waxa caadi ah in la saxeexo heshiis si aad wax u iibsato. Heshiis (avtal) ama kontaraag (kontrakt) waa wax aad adiga iyo dhinaca kale ku heshiisaan. Waxa aad, tusaale ahaan, shirkada gaar ah ka iibsan kartaa telefoon moobayl ah oo interned wata. Waxa aad markaa shirkadan bil walba siin doontaa qadar go'an oo lacag ah – caadi ahaan wakhti dhowr sanno ah.
Saxeexida heshiis ama kontaraag ayaa caadi ahaan loogu yeedhaa ‘siinta saxeexaaga’ (underskrift, namnteckning ama signatur). Marka aad saxeexdo heshiis, isma badali kartid; waa inaad markaa raacdo dhamaan qeybaha heshiiska.
Heshiisyo badan waxa uu micnahoodu yahay inaad muddo dheer shirkad siin doonto lacag. Sidaas darteed, waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa aad bixinayso ee dhamaan kharashyada ka hor inta aanad saxeexin. Marmarka qaarkood, waa inaad bixiso dhowr boqol oo karoon bil kasta dhowr sanno.
Si foojignaan badan leh u ilaasho macluumkaaga bangiga, lambarkaaga kaadhka bangiga iyo lambarkaaga shakhsiga. Waa inaad kaliya isticmaasho macluumaadkan marka aad xidhiidh la sameyso bangigaaga ama hay'ada dawlada, ama haddii aad shirkad aad ku kalsoontey wax ka iibsato.
Ka qaalisan in la kala qeybiyo lacagtaad bixinayso
Miyaad qorsheynaysaa inaad soo iibsato wax qiimo badan taagan? Haddi aad, dukaanka aad wax ka iibsato markasta ayaa ku weydiin kara inaad lacagta kala qeybin karto qeybo badan. Taas waxa loo yaqaanaa in hafto lagu bixiyo (avbetalning) ama in kolba qeyb la bixiyo (delbetalning). In wax hafto lagu bixiyo ama kolba qeyb la bixiyo ayaa caadi ahaan qaali ah guud ahaan marka la garab dhigo in hal mar la wada bixiyo. Haddii aanad biilashaada wakhti ku bixin, waxay si dhakhso ah u noqon doontaa mid aad u qaali ah.